Kuderedza uremu, Kurwisa Kusuruvara uye Zvimwe Neaya Mahara Akatemwa Nguva Mapurogiramu neMitambo | IPhone nhau
Deredza uremu, kurwisa kushaya hope uye nezvimwe, nemaapplication emahara nemitambo kwenguva yakati rebei
Ndinokuvimbisai kuti handina kuona zuva richiuya, uye seni, zvirokwazvo vazhinji venyu makanga makafanana. Asi zuva iro raiita kunge risingauyi rakazosvika uye isu tinogona kutotaura kuti wave wekupedzisira Chishanu! Vazhinji vedu tichave takagadzirira pasina nguva yekuzorora zvishoma kupfuura zvakajairwa, uye kukanganwa nezve kunetseka kwevhiki. Uye kukupa ruoko mune iri basa rakaoma, nhasi ndinokuunzira a mutsva muunganidzwa wemahara kunyorera nemitambo, saka unogona kushandisa zvakanyanya nguva yako yemahara pakupera kwevhiki.
Asi tisati tatanga, yambiro yakajairwa, yekuti isu tave kutozivana 😜: anotevera mafomu uye mitambo mahara kwenguva shoma, ndiko kuti, vanofa. Kubva kuActualidad iPhone isu tinogona kungokuvimbisa iwe kuti anoshanda panguva yekutsikisa ichi posvo asi zvinosuwisa, hatizive kuti zvinopihwa zvinopera nechikonzero chakareruka: vanogadzira havawanzo kuzivisa kudaro, sekungodonha kwemutengo kwavo kuri kushamisika, zvakare kushamisika kana vachizobhadharwa zvakare. Naizvozvo, download ikozvino uye funga gare gare, ayo emahara uye asingakudhurire chinhu.
1 Diki diki kutasva hood
2 Easy Kudya Hypnosis Kurasa Mafuta & Stop Binge Kudya Pro
3 Poresa Kusurukirwa Hypnosis
4 Bubble shongwe 2
5 Preschool Mhuka
Diki diki kutasva hood
Vazhinji venyu vatove vanamai nababa uye munoziva kuti iyo iPhone nePadad inogona kuva maturusi akanaka kwazvo ekubatsira kudzidzisa nekukudza vadiki vari mumba. Ndokusaka nhasi isu tichitanga iyi sarudzo yemahara maapplication nemitambo na Diki diki kutasva hood, yakasarudzwa neApple pachayo seFree App yevhikia, tisingakanganwe kuti yaive chikamu chesarudzo ye "Zvakanakisa zvegore ra2015" muRussia App Chitoro.
"Little Green Kutasva Hood" chinhu chitsva chishandiso cheApp chevana. Nakidzwa nemifananidzo yaro yakanaka, mavara anodikanwa, yakajeka nyaya, uye yakanaka kwazvo nyaya! Tsvaga inoshamisa yakadhonzwa uye inonakidza nyaya yemusikana mudiki, gogo yake, shamwari dzake dzemhuka uye mhumhi ine nzara. Asi usatya. Mune ino vhezheni yenyaya yechinyakare inozivikanwa naCharles Perrault uye nehama Grimm, mhumhi haizofaniri kudya chero munhu. Iwe unoda kuziva nei? Wobva wodhaunirodha Little Green Riding Hood izvozvi uye unakirwe nevana vako vachitamba mini-mitambo uye nekudzidza mbuya yekubika mabikirwo!
Little Green Riding Hood ine zvimwe "Vakanaka mavara" uye zvinoshamisa mifananidzo uye mifananidzo yakasikwa neyechokwadi uye ane mukurumbira wekatuni saAndrey Gordeev (anokunda shumba yeCannes uye mimwe mibairo). Uye zvakare, inopa yakawanda nhamba ye mini mitambo izvo "zvinofadza nekuseka vana nevakuru zvakafanana," pamwe neiyo Ambuya Cookbook, nekuda kwekuti vana vadiki vanodzidza mabikirwo echikafu chine hutano uye chakaringana ».
Little Green Riding Hood ibhuku rakafambidzana rePadad iro rinosvitsa vana kune hupenyu hune hutano munzira yekutamba. Iyo inofadza ngano nezvehushamwari, iyo yoga uye pfungwa yekurarama zvine hutano.
Diki Green Kukwira Hood: Bhukuvakasununguka
Easy Kudya Hypnosis Kurasa Mafuta & Stop Binge Kudya Pro
Iyi app, "Inowanikwa pane Discovery Channel," inovimbisa a kukurumidza kurasikirwa uremu nekuda kwerubatsiro rweyambiro ye hypnosis. Zvisinei, unoda kuti ndikuudze chii! Ini handitende chero chinhu, asi sezvo iri yemahara, ini ndiri kuzoyedza, ngatione zvinoitika.
Kudya Kunyore Hypnosis Iyo ine mutengo wenguva dzose we3,99 euros asi ikozvino unogona kuva nayo zvachose yemahara kwenguva shoma
Poresa Kusurukirwa Hypnosis
Uye kana kunze kwekudzora uremu, isu tinofanirwa kurara zvirinani, heino chimwe chikonzero cheku hypnosis, ino nguva yekurwisa kushaya hope.
Poresa Kusurukirwa Hypnosis Iyo ine mutengo wenguva dzose we3,99 euros asi ikozvino unogona kuva nayo zvachose yemahara kwenguva shoma
Bubble shongwe 2
Inonakidza juego, yakapusa asi inoda kunyatsoita, uye izvo zvinoita kuti unamatire kune yako iPhone kwemaawa.
Bubble shongwe 2 Iyo ine mutengo wenguva dzose we1,99 euros asi ikozvino unogona kuva nayo zvachose yemahara kwenguva shoma
Bubble shongwe 21,09 €
Uye isu tinopera nenzira imwecheteyo isu yatanga, nemutambo wepachena weiyo diki imba (kusvika pamakore mashanu) nekuda kwavachakwanisa dzidza pfungwa dzekutanga dzekuverenga uye masvomhu nenzira inonakidza uye inovaraidza.
Preschool Mhuka Iyo ine mutengo wenguva dzose we3,99 euros asi ikozvino unogona kuva nayo zvachose yemahara kwenguva shoma
Preschool Math Math5,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Deredza uremu, kurwisa kushaya hope uye nezvimwe, nemaapplication emahara nemitambo kwenguva yakati rebei
Anonakidza McDonald's parody kutevedzera mavhidhiyo panowanikwa Jony Ive
Apple yakafemerwa neMalaga Mutambo posita yekupa WWDC17